Itinye n'ọkwa Catheter Tipping Heating Process Application
Nnukwu Frequency Induction Catheter Tipping Heating Ngwa
Ihe ntinye ihe ntanye a na - acho ihe a choro na ulo oru ogwu maka mmeputa nke catheter tubes.
Site na ịkụnye ihe catheter, ike RF na-ebuli ọnọdụ okpomọkụ na igwe anaghị agba ma ọ bụ ebu ọla, na-enweghị ịkpọtụrụ ebu ma ọ bụ jiri ọkụ na-emeghe. A na-akpụzi okirikiri nke catheter ahụ site na ịtinye tubing plastic n'ime kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ ebu iji mepụta akụkụ gbara gburugburu. Ọgwụgwụ nke catheter tube na-enye ohere ịtinye tube ahụ n'ime mmadụ n'enweghị nsogbu ọ bụla na anụ ahụ. Igwe ahụ ga-enwekwa waya nke na-etinye n'ime tubing ahụ iji gbochie nguzobe nke mgbochi. Ikike izi ezi na njikwa izi ezi nke itinye n'ọkwa bụ ezigbo maka ụdị ọgwụgwọ a kapịrị ọnụ. A na-ejikarị ihe ndị a na-eji jaket mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ iji mee ka mmiri dị ọkụ laghachi na mmalite mmalite okpomọkụ akọwapụtara nke na-enyere usoro ntinye aka ka ọ bụrụ nke mpaghara / oge okirikiri ga-ebugharị.
Ngwunye ihe eji ekpo oku n'ihi na catheter tipping ana achi achi a akwa ogo nke repeatability. Usoro n'ichepụta ngwa ngwa na ọfụma.
Ntuziaka nke catheter na-achọ obere ike. HLQ nwere ọtụtụ ike dị ala nke dị mma maka ịkụnye catheter ma ga-akwado akụrụngwa ziri ezi dabere na akụkụ yana ngwa ngwa pụrụ iche.
Heating Catheter Tipping anwụ
ebumnobi: Iji kpoo ihe ntanye aluminom na-anwu elu karịa 2850F n'ime 2 ruo 5 sekọnd maka ịmepụta ihe catheter. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme kpo oku n'ime sekọnd 15 na akụrụngwa mgbatị ochie. Onye ahịa ahụ ga-achọ iji steeti siri ike akụrụngwa ọkụ kpo oku iji belata oge kpo oku ma mepụta usoro ka mma.
ihe: Aluminom catheter tipping ịnwụ 3/8 ″ OD na 2 ″ ogologo na a nonmagnetic aka uwe n'elu okpomọkụ mpaghara. A kọwara ihe na-eme ka catheter dị ka nke yiri polyurethane plastic. Ọzọkwa, nchara waya nchara nke 0.035 ″
e tinyere ya n’ime kateetụ catheter ka ọ ghara ịda.
ngwa: Ekpebisiri ike ike DW-UHF-3kW nke ọma iji mepụta nsonaazụ ndị a nke ọma:
–Oge kpo oku nke 3.3 sekọnd iru 5000F na etolite catheter ka enwetara site na ojiji nke uzo abuo (2) karia abuo (2) nke di na nkpuru ahihia.
–Ejiri k catheter dị mma site na ịpị 1/2 ″ nke polyurethane tube n'ime ebu ahụ ka ọ na-ejigide ọdịdị site na iji waya 0.035 to iji gbochie ida nke ọkpọkọ ahụ. Nsonaazụ laabu gosipụtara na emezuru oge dị oke mkpa nke ga-enye ohere ịbawanye ụba na mmepụta ma ghara ịchụ àjà dị mma.
Ngwá Agha Ngwá Agha: DW-UHF-3kWkW nkwenye siri ike ntinye ike gụnyere ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nke nwere otu (1) capacitor ngụkọta 1.2 µF.
Categories Technologies Tags Katalik Tipping, Catheter Tipping Brazing, Catheter tipping Heating, catheter tipping ntinye brazing, Itinye n'ọkwa Catheter Tipping, ntinye ihe ntinye nke Catheter Tipping Brazing, induction catheter tipping kpo oku, Ihe ntanye RF, Ihe ntanye RF na-enye aka, RF catheter tipping kpo oku Mail igodo